Midowga musharixiinta mucaaradka oo markale shir deg deg ah ku yeelanaya Muqdisho & banaanbaxyo la abaabulayo.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka waxaa markale kulamo xasaasi ah ku yeelanaya musharixiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada lafilayo inay ka qabsoonto 2021.
Xogihii ugu dambeeyey ee aannu helayno ayaa sheegaya in shirka looga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo khamiistii lasoo dhaafay markii uu soo dhammaaday shirkii shanta maalmood u socday.
Waxaa kale oo musharaxiinta qaarkood ayaa waxaa kulanka inta uu socdo looga dhageysan doonaa warbixin ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo u muuqata mid sii galeyso marxalad adeg, sida la sheegay.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha ayaa War-murtiyeedkii ay shirkoodii kasoo saareen waxaa ay ku dalbadeen in la kala diro guddiga doorashada Soomaaliya waxaana durba taageeray madaxweynaha Jubbaland.
Shaqsiyaad ka adhaw musharixiinta ayaa sheegay in musharixiintu ay abaabulayaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo banaanbaxyo nabadeed oo ka dhaca magaalada Muqdisho si loo muujiyo aragtida shacabka ee dowladda hadda jirta iyo qaabka ay wax u socdaan.
Qash-qashaaddii ‘Nairobi Accord’ miyaa weli socota?! Minja sagaaro meel kaley ka MUULUX MUULUX leeyihiin!!!